बातचित – doodhmati || dudhmati
Home / बातचित
प्रदेश अध्यक्षका लागि म पनि उम्मेदवार छः शेषनारायण यादव, प्रदेश सचिव संघिय समाजवादी फोरम नेपाल
प्र. संघिय समाजवादी फोरमको प्रदेश अधिवेशनको तयारी कुन रुपमा चलिरहेको छ ? सिरहाको लहानमा वैशाख १३ र १४ गते प्रदेश अधिवेशन रहेको छ । प्रतिनिधिहरुको छनौट भईसकेको छ । एकातिर अधिवेशन स्थललाई सजाउने, अधिवेशनमा सहभागी हुन आउने नेता, कार्यकर्ताहरुलाई खान बस्नेको व्यवस्था मिलाउने कार्य भईरहेको छ भने विभिन्न व्यक्तिहरुले प्रदेश …
March 19, 2019	बातचित 0
प्र. जनकपुर साहित्य कला तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा तपाईको सक्रियता निक्कै देखिन्थ्यो कस्तो रह्यो यो महोत्सव ? ग्राण्ड । मैथिली कला साहित्य एवं संस्कृतिको विकासमा यस्ता कार्यक्रमले ठूलो बल दिने जस्तो लागिरहेको छ । मिथिलाको प्राचीन सभ्यतालाई हामीले नै उजागर गर्नु पर्छ । र यो उजागर गर्नुमा यस्ता कार्यक्रमहरु धेरै …
प्र. मिथिला मध्यमा परिक्रमा तपाईहरुले मोटर साइकलबाटै गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ? परिक्रमा मात्रै नभन्नुस । धर्म पनि गर्ने साथै परिक्रमाको अनुगमन गर्ने नेपाली कांग्रेस नगर समितिको योजना पनि रहेको छ । यो योजना अन्तर्गत सयौँको संख्यामा कांग्रेसीका साथै स्थानीयवासीको सहभागिता रह्ने छ । २० वर्षदेखि ५० वर्षसम्मका व्यक्तिहरु …
प्र. जनकपुर साहित्य कला तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव कुन रुपमा चलि रहेको छ ? तीन दिन भई सकेको छ । तीनवटा महत्वपूर्ण नाटकहरु समेत मञ्चन भईसकेको छ । रामानन्द युवा क्लवको जानकी, लोक संचार काठमाडौँको किशोरी र अफगानिस्तानको त रहाए नामक नाटक मञ्चन भएको छ । जनक सेना यात्रा पनि …